စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် တရုတ် LCD အခန်း ဒစ်ဂျစ်တယ် အပူချိန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူများ - Zhechi Electric
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
LCD Room Digital Temperature Controller
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ ကြမ်းပြင်သန့်ရှင်းရေးစုတ်တံများ၊ LCD Room Digital Temperature Controller၊ wafer အတွက် သတ္တုလက်စွပ်၊ PP နှင့် နိုင်လွန်နှင့် ဝါယာကြိုးများ၊ ပလပ်စတစ်ပြား စသည်ဖြင့် စုတ်တံအစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်ပါသည်။
LCD Room Digital Temperature Controller ၏ လုပ်ဆောင်ချက်
1. LCD Room Digital Temperature Controller သည် ရေနွေးနွေး (ကြမ်းပြင်) အပူပေးစနစ်များနှင့် တိုက်ရိုက်လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး လုပ်ငန်းသုံးအဆောက်အအုံများ၊ လူနေအိမ်အဆောက်အအုံများ၊ အပေါ့စားစက်မှုဇုန်အဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်အပူပေးစနစ်၊
2.ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုပါရှိသော ပိုက်နှစ်ခု သို့မဟုတ် ပန်ကာထိန်းချုပ်မှုရှိသော ပိုက်လေးခု
3. အပူပေးကိရိယာအတွက် လက်စွဲအဖွင့်/အပိတ် ထိန်းချုပ်မှုအထွက်အား
4. Multi ကာလအစီအစဉ် (တနင်္လာ-တနင်္ဂနွေ၊6ရက်အတွင်း6အပူချိန်သတ်မှတ်ခြင်း)
7. အမြင့်/အလယ်/အနိမ့်လေတိုက်နှုန်းကို ကိုယ်တိုင်ထိန်းညှိခြင်း။
8. Timing power ဖွင့်/ပိတ် နှင့် အပူချိန်ချိန်ညှိခြင်း။
9. ခလုတ်သော့ခတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်၊ အပူချိန်ကန့်သတ်သတ်မှတ်မှု၊ အိပ်စက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်
11. ရောင်ရမ်းနေသော ABS ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် နှောင့်နှေးသောပလပ်စတစ်
LCD Room Digital Temperature Controller ၏ ကန့်သတ်ချက်များ
မော်ဒယ် ZS-9F LCD Room Digital Temperature Controller
Load Current GA-3A ၊ GB-25A
အထွက်ပါဝါ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ <3000W
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ ကန့်သတ်ချက် 220VAC±10%, 50/60Hz
hot Tags:: LCD အခန်းဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်
Hot Runner Digital Temperature Controller
Smart Wifi အခန်း အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ အပူချိန် ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
ပရိုဂရမ်လုပ်နိုင်သော Wifi အပူချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ